Nezvedu - Lingshou County Xinfa Mineral Co, Ltd.
Lingshou County Xinfa Mineral Co, Ltd.
Lingshou County Xinfa Mineral Co, Ltd. yakavambwa muna Kubvumbi, 2002, iri muLujiawa Industrial Park, Lingshou County, Hebei, China. Isu tiri nyanzvi yekugadzira yakanakisa-yakanaka mica poda, mavara edeakisi, akaumbwa emagetsi, vermiculite nezvimwe zvine gore rekugadzira rinokwanisa kupfuura matani zviuru gumi. Kambani yedu inofukidza nharaunda inosvika zviuru makumi matatu, uye nenzvimbo yekuvaka inotora kupfuura zviuru gumi nezvivakwa zvehofisi 1,200㎡. Muna 2003, kambani yedu yakapihwa se "Enterprise of Kuona Chibvumirano & Kuchengeta Vimbiso" naHebei Provincial Bureau of Industry neCommerce; Muna 2005, yakapihwa se "Rakavimbika Chiyero cheMhando Yeyero" naLingshou County technical Supervision Bureau; Muna2009, yakapfuura ISO9001: 2000 quality management system certification.
Tave nemashopu matatu, 3 forklifts uye 1 yekutakura motokari. Huwandu hwekugadzira huwandu hwemarudzi ese zvigadzirwa hwasvika matani zviuru gumi nezvisere pagore nehuwandu hwe100% yekupfuura pakuongororwa kwechigadzirwa.
Dhipatimendi rekuongorora hunhu rakagadzirwa nemhando yepamusoro laser sisitimu yekuyera kuyera, mita yakachena, yakakwenenzverwa kumusoro kwemagetsi, dhiza rekushisa, choto chekuomesa, bhokisi rekusevha, chipini che PH, chishandiso chakashata chekuisikidza inotakurika yemagetsi musara, mini-pulverizer uye anopfuura mazana maviri standard sieves uye zvimwe zvakakwana zvekuedzwa zvigadzirwa.
Kubva pakagadzwa, isu takazvipira kuR & D yekushandiswa kwezvigadzirwa zvedu uye takapa zvigadzirwa zvemhando yepamusoro zvezviwanikwa zvinopfuura zana panguva yekuunganidza kwedu ruzivo rwakakura rwekudzoka izvo zvakatibatsira zvikuru mukupa vatengi nekutanga. -rate zvigadzirwa nemasevhisi, achikosha edu epakati bhizinesi mweya "Kupona Nekubatana uye Kugadziridza neInovation".
Kubva pakagadzwa, isu takazvipira kuR & D yekushandiswa kwezvigadzirwa zvedu uye takapa zvigadzirwa zvemhando yepamusoro zvezviwanikwa zvinopfuura zana panguva yekuunganidza kwedu ruzivo rwakakura rwekudzoka izvo zvakatibatsira zvikuru mukupa vatengi nekutanga. -rate zvigadzirwa nemasevhisi, achikosha edu epakati bhizinesi mweya "Kupona Nekutendeseka uye Kugadziridza neInovation"
Zvigadzirwa zvedu zveMica poda, zvakadomwa "發", ikozvino zvave zvakakurumbira mumapurovhinzi anopfuura makumi maviri mukati meChina nemarudzi mazhinji nematunhu ari kunze kweChina, kusanganisira nyika kubva kuEuropean Union, South America neSouth East Asia.